Fahasamihafana eo amin'ny Toko 7 sy Toko 13 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Toko 7 sy Toko 13 | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Hafa / Fahasamihafana eo amin'ny Toko 7 sy Toko 13
Fahasamihafana eo amin'ny toko faha-7 sy ny toko faha-13
10 Desambra 2010 Narotsak'i Olivia
Toko 7 vs Toko 13
Na dia toa nalaina avy tao amin'ny boky aza ny anarana hoe toko7 sy toko faha-13, dia nanjary zava-dehibe tokoa ho an'ny olona mandalo dingana ara-bola tena ratsy. Rehefa entina mitrosa ny olona ka tsy afaka mamerina ny trosany, dia afaka manao fatiantoka amin'ny banky ao ambanin'ireo toko roa ireo izy. Ny fatiantoka dia dingana ara-dalàna izay novolavolaina hanampiana ny olona sy ny orinasa amin'ny famoahana ny trosany na hamerenana azy eo ambany fiarovan'ny fitsarana bankiropitra. Ny fatiantoka dia mazàna amin'ny karazany roa, ny famonoana sy ny fandaminana indray. Na dia angatahina aza ny andininy faha-7 rehefa mameno ny fatiantoka amin'ny fahafoanana, ny toko faha-13 dia ampiasaina amin'ny tranga fandaminana indray.
Ny fatiantoka alefa eo ambanin'ny toko faha-7 dia fantatra amin'ny hoe bankiropitra mahitsy. Ity toko ity no iray tianao indrindra ho an'ny ankamaroan'ny olona mametraka fatiantoka. Tafiditra ao anatin'izany ny fanafoanana ny fananan'ny olona rehetra sy ny fanefany ny trosany. Manapa-kevitra ny fitsarana hoe ohatrinona ny vola alefan'ilay mpampindram-bola. Ny sasany amin'ny fananan'ny olona mametraka fatiantoka dia tsy afa-manoatra. Anisan'izany ny fiarany sy ny tranony ankoatry ny fananana sasany. Ny fisotroan-dronono dia atao araka ny lalàn'ny fanjakana onenan'ilay olona. Tsy mora ny nametraka ny fatiantoka tao ambanin'ny toko faha-7 hatramin'ny nananganana fanovana sasany tamin'ny taona 2005. Ankehitriny raha 25% na mihoatra ny trosa azo averina amin'ny alàlan'ny famonoana ny fananana dia tsy mendrika ny hametraka eo ambanin'ny toko faha-7 ilay olona.
Ny saram-panafarana ho an'ny toko 7 dia $ 209, ary maharitra mandritra ny 3 ½ volana ny fizotrany rehetra. Mandritra io vanim-potoana io dia tsy misy haba takiana amin'ny tribonaly.
Mandritra ny fisiany amin'ny fatiantoka dia mila manome ny zava-misy sy ny fampahalalana rehetra toa ny
Lisitry ny mpampindram-bola miaraka amin'ny fitakiany
Loharano sy habetsahan'ny karamain'ny mpampindram-bola isam-bolana
Lisitry ny fananana rehetra, ao anatin'izany ny antsipirian'ny trano
Lisitry ny fandaniana isam-bolana
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fatiantoka nateraky ny toko faha-13 dia fantatra amin'ny hoe fandaminana indray. Eto dia tsy maintsy ambaranao amin'ny tribonaly ny drafitrao momba ny fomba kasainao handoavana ny trosanao. Eto, ny trosa sasany dia voaloa tanteraka; ny sasany kosa dia omena ampahany fa ny sasany kosa voafafa tanteraka manome anao fanamaivanana. Ny fanamaivanana iray hafa azon'ny olona iray dia ny fotoana maharitra hamerenany ny trosa. Toko 13 dia tsy mangataka fanafoanana ny fananana. Manapa-kevitra ny fitsarana ny drafitra fandoavam-bola anao rehefa avy nihaino ny fitarainana nataonao.
Ny olona tsirairay dia afaka mametraka fatiantoka amin'ny banky eo ambanin'ny toko 13 raha toa ka ambany $ 360.475 ny trosany ary ny trosany azo antoka dia latsaky ny $ 1081400. Ny fampahalalana takiana mba haroso amin'ny tribonaly dia mitovy amin'ny toko 7. Ny saram-pitsarana $ 194 dia mihatra raha mametraka ny fatiantoka amin'ny toko faha-13.
Mora ny mahita fa ny toko 7 sy ny toko faha-13 dia natao hanampiana olona miatrika krizy ara-bola. Samy nanamora ny fampisamborana azy ireo satria avelany hifoka rivotra izy amin'ny alàlan'ny fanamorana ny enta-mavesany. Saingy, mifarana eto ny fitoviana, satria misy ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny fomba.
Na dia eo aza ny famonoana ny fananan'ny trosa eo ambanin'ny toko faha-7 mba hanamorana ny famerenam-bola, dia ny fandaminana ihany no ao ambany toko faha-13 ary ny fananan'ny trosa dia voatahiry.
Ny fatiantoka naseho teo ambanin'ny toko faha-7 dia nihoatra ny 3 ½ volana raha toa kosa ka manana fotoana maharitra mandalo taona maro ilay trosa mba hamerenany ny trosany eo ambanin'ny toko faha-13.
Olana lehibe tokoa ny fatiantoka ary tokony handanjalanja ny safidiny rehetra alohan'ny hametrahana izany any amin'ny tribonaly.
Ho famaranana, azo lazaina fa noho ny fanovana tato ho ato izay dia lasa sarotra ny mametraka fatiantoka amin'ny alàlan'ny toko faha-7, ary tsara kokoa ho an'ny fandaminana indray ny trosanao mba hisorohana ny fahasahiranana rehefa mametraka fatiantoka.
Fahasamihafana eo amin'ny Corporation sy ny LLC Fahasamihafana eo amin'ny NBN Australiana sy NBN Co Ltd. Fahasamihafana eo amin'ny Roth IRA sy ny IRA nentim-paharazana Fahasamihafana eo amin'ny gripa kisoa sy gripa mahazatra Fahasamihafana eo amin'ny fisaraham-panambadiana sy ny fisarahana ara-dalàna
Filed Under: Ny hafa tagged With: Bankruptcy , Toko 13 , Toko 7
Fahasamihafana eo amin'ny vozon-tranonjaza Thoracic sy Lumbar Vertebrae
Fahasamihafana eo amin'ny Brut sy Champagne
Fahasamihafana eo amin'ny fialamboly sy mahatsikaiky
Fahasamihafana eo amin'ny Blackberry Torch 9800 sy Touch 9860 (Monza)
Fahasamihafana eo amin'ny CRISPR sy CRISPR Cas9